कलेक्टर घर सामान - सिद्ध व्यापार विचार
धेरै मानिसहरू अन्तमा "आफ्नो मामा मा" काम रोक्न र आफ्नै व्यापार, केवल रहन को लागि आवश्यक रकम बचत जो छैन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, तर केही छुट्याइएको पैसा को "एक वर्षाको दिन को लागि।" र धेरै सिर्फ एक काम गर्न आवश्यक छ। घर मा यस्तो काम सङ्गठनलाई रूपमा लागत धेरै आवश्यकता छैन यो मामला मा फर्नीचर को कलेक्टर, आदर्श पेशा बन्नेछ। यो केवल आवश्यक उपकरण को एक सेट र एक विशाल कोठा आवश्यक हुनेछ। र सबै बाँकी सामान्यतया ग्राहकहरु प्रदान गरिएको छ।
फर्नीचर को कलेक्टर: लाभ
यो पेशामा, पर्याप्त मात्र अभ्यास को केही महिना सिक्न गर्न। निस्सन्देह, तपाईंले यो पाठ मा पेन्सन कोष गर्न योगदान बारे भूल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, घर देखि काम, तपाईं एउटा सरकारी समय प्राप्त हुनेछ। तर मात्र होइन यो व्यवसाय भविष्यमा विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ, तर पनि सहज बुढेसकालमा सुनिश्चित गर्न। फर्निचरहरू कलेक्टर पनि चरम बुढेसकालमा सञ्चालन गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ ताकि कुनै उमेर यहाँ सीमा पनि छ।
यो पेशामा मात्र बेफाइदा - यो हल्ला। द्रुत विधानसभा लागि विभिन्न बिजुली उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ, र तिनीहरूले jarring छन्। तपाईंले सुरू गर्नु अघि त, यो राख्न अग्रिम छिमेकी सूचित र काम छौँ के समय बारे तिनीहरूसँग एउटा सम्झौता पुग्न आवश्यक छ।
त्यो फर्नीचर को सक्षम शुरुवात कलेक्टर हुनुपर्छ
सबैभन्दा यो पेशा मा आवश्यक - के केही बढईगीरी कौशल को अस्तित्व। निस्सन्देह, तपाईं उपकरण काम गर्ने क्षमता आवश्यक, तर यो अनुभव प्रतिस्थापन कहिल्यै गर्न सक्नुहुन्छ।
पनि आफ्नै डिजाइन बनाउन कम उपयोगी हुन र कौशल (विशेष कार्यक्रम वा कागज मा मद्दत संग - कुरा छैन)। यो गठन प्रक्रिया गति र त्रुटिहरू धेरै जोगिन हुनेछ।
तपाईं विशेष प्रशिक्षण वा अभ्यास undergo गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग फर्नीचर हरेक काम कलेक्टर निःशुल्क सहयोगीहरूले लाग्न सक्छ। यो अभ्यास मात्र कौशल को रहस्य छैन सिक्न, तर पनि राम्ररी आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न।
फर्नीचर को कलेक्टर
तपाईं विषय थप विकास गर्नु अघि, तपाईं के सम्झौता फर्नीचर व्याख्या गर्न आवश्यक छ। यो व्यक्तिगत भागहरु हुन्छन् र एक ठूलो बक्स, व्यक्तिगत ब्लक (मोड्युलहरू) राखिएका छन् जसमा विभाजन, भित्र विभाजित जस्तो।
यस्तो फर्नीचर संग काम - यो शायद सबै भन्दा राम्रो फिट छ जो सबै भन्दा सरल निर्देशन, छ शुरुवात। यस मामला मा, यो प्रत्येक अन्य विवरणहरू समायोजन गर्न आवश्यक छ। आदर्श, यी निर्माताहरु मगनी घटक हो। र काम सबै बाँकी प्राय केही घण्टा लिन गर्दैन।
पहिलो स्थानमा घर मा यस्तो अभ्यास लागि, यदि तपाईं हुनेछ, एक आपूर्तिकर्ता फेला पार्न आवश्यक छ वा भविष्यमा फर्नीचर को निर्माताको आधारभूत भागहरु। यसले लाग्न सक्छ रूपमा गाह्रो छैन। फर्नीचर यस प्रकारको बढ्दो लोकप्रियता यसलाई अझ बढी ध्यान प्रदान गर्दछ। यो "निःशुल्क Carpenters", काम सुख इच्छा, बडा रही त्यो पनि हो।
तपाईं को पाठ्यक्रम पूर्ण फर्नीचर आफूलाई बनाउन सक्छ। तर यो मामला मा उपकरण मात्र लागत सीमित छैन। तिनीहरूले सुरक्षित कम्प्युटरमा संग सम्बन्धित उपकरण, सामाग्री र विशेष कम्प्युटर कार्यक्रम को खरिदका लागि रकम गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ।
फर्नीचर को कलेक्टर - आफ्नो गतिविधिहरु सुरु गर्न उपयुक्त विशेषता छ। अन्य सबै पेशों जस्तै, यो यसको कमीकमजोरी छ, तर तिनीहरूले सजिलै ती सद्गुण छ कि यो एक आदर्श व्यापार बनाउन ओभरल्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
एक architect कसरी बन्न, र तपाईं के गर्न आवश्यक?
व्यावसायिक निर्देशक: जिम्मेवारी आवश्यकताहरु र व्यक्तिगत गुणहरू
16 संकेत एक सहयोगी आफ्नो विश्वसनीयता undermines कि
बिना काम अनुभव बिना लेखाकार: एक पेशेवर कसरी गर्ने
काम storekeeper। कर्तव्य र सुविधाहरू
पेशागत सुरक्षा मा विशिष्ट निर्देशन - कुनै पनि उत्पादन मा आधारभूत कागजात
प्रति 1 m2 bricklaying सिमेन्ट खपत: सिमेन्ट मिश्रण र यसको मान्यता को प्रकार
प्राकृतिक परिसंचरण संग ताप सिस्टम: डिजाइन सुविधाहरू, लाभ र बेफाइदा
कृषि के हो? कृषि को उद्भव को इतिहास
को हिउँदमा अड्डा लागि मत्स्य पालन। बरफ मा जाडो माछा मार्ने
बाथरूम मा खिंचाव छत: समीक्षा। प्रयोगको सम्भावना
डिस्क लेख्ने-सुरक्षित छ। सम्बोधन
खुला जमीन मा काउली बीउ रोपण। काउली: रोपण बिरुवा र हेरविचार
एयर "Bork": अवलोकन, विशेषताहरु, प्रकार र मूल्यांकन
को ताप सिस्टम मा दबाव। को ताप प्रणालीमा संचालन दबाब
"Minecraft" मा कुराहरू कसरी गर्न सजिलो र छिटो छ
समुद्र नाक स्प्रे। कसरी नुन पानी आफ्नो नाक धुन?
कसरी स्लिम बन्न? यस्तो मोडेल कसरी बन्न?